musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » 3200-kilometre trek inotangazve Slow Tourism
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Iyo nzira yekunonoka kushanya
Sezvo rimwe boka raifamba kwemazuva masere vachitevedza Via Francisca yeLucomagno, rimwe boka kweinenge mwedzi miviri rakananga kuRoma mushure mekubva kuCanterbury. Iwo mapoka maviri evaifamba aive chikamu chekushanya kwekushanya mu "Mugwagwa unoenda kuRoma 8. Tanga zvakare!"
Iwo mapoka maviri akabatana muPavia, guta guru reLombard, kutangazve kushanya kunononoka.
Idzi dzaive nzendo mbiri dzakasiyana nechinangwa chimwe chete: chekusimudzira rwendo pacharo - kunonoka kushanya, mune ino nguva inozivikanwawo sekufamba.
Iyo tsika uye yekusimudzira yekusimudzira kwenzvimbo dzinoyambuka mukuita iri kuve inozivikanwa zvakanyanya.
Boka rega rega rakabva munzvimbo dzakasiyana ndokuzosangana neChipiri, Nyamavhuvhu 10, muPavia mushure memazuva ekufora. Rimwe boka raive nenhengo dzeAEVF, iyo European Association yeVie Francigene, iyo yakasarudza kupemberera makore ayo makumi maviri nerwendo rwemakiromita mazana matatu nemazana maviri. Rimwe boka rakatora rwendo rwemazuva masere vachitevedza Via Francisca del Lucomagno - rwendo rwakabatanidza Lake Constance kuLake Lugano uye rwekupedzisira kuPavia, mushure mekuyambuka Lombardy kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba kuburikidza nemapaki nenzvimbo dzeUNESCO. Via Francisca del Lucomagno rwendo rwekare rwakabatana pakati peEurope neRoma.
Zvinhu zviviri izvi zvave shamwari kwenguva yakati, sevamiriri vavo, Massimo Tedeschi purezidhendi weAEVF, naMarco Giovannelli naFerruccio Maruca (zvichiteerana nemunyori wegwaro uye munyori weInstitutional Tafura) yeVia Francisca del Lucomagno.
"Isu takaronga zvakanyanya kusimuka kwechikwata ichi chemapilgrim kubva kuLavena Ponte Tresa (Varese), pekutanga chiteshi cheItaly paVia Francisca del Lucomagno, kuti vasangane nemapilgrim e mugwagwa unoenda kuRoma, ” akatsanangura Marco Giovannelli.
“Inguva inoratidza kutangazve mushure menguva yakaoma. Inononoka kushanya uye kufamba kunokutendera kuti unakirwe uye unakidzwe nenharaunda, "akadaro Massimo Tedeschi," tichifunga kuti mapilgrim nerudzi urwu rwekufamba zvinokurudzira kutaurirana pakati petsika dzeEurope nehupfumi hwenyika. "
Via Francigena inomhanya ichibva kuEngland, uko iine "0 km" pamberi peKathedral yeCanterbury, kuenda kuRoma kuburikidza nematunhu mazhinji, kusanganisira France neSwitzerland uye ichienderera mberi nerwendo rwayo kusvika kuSanta Maria di Leuca, (Puglia) iyo finibus terrae , iyo yeItaly (kumagumo ePasi), nekuda kwekutambanuka kweVia Francigena yekumaodzanyemba. Sangano rave richirisimudzira kwemakore makumi maviri riri kupemberera zuva rekuzvarwa rakakosha iri nekufamba kwaro kwese - rwendo rwemakiromita 20 kuEurope.
Iyo Via Francisca del (ye) Lucomagno pachinzvimbo inotanga kubva kuGerman, zvakanyatso kubva kuLake Constance, yozopfuura iyo Canton yeGrison neCanton yeTicino (Switzerland), ine ndima zvakare muLiechtenstein. Kuyambuka iyo Lucomagno Pass, kwainofanira kubhadhara zita rayo, iyo inopinda muItari ichibva kuLake Ceresio.
Kwakave kubva pano kuti vafambi gumi vaibva kuTrentino, Campania, neLombardy vakatanga kubatana ne "vamwe" veRoad yekuRome.
Iyi yanga iri nguva yekufananidzira iyo zvakare inosimbisa kuti rudzi urwu rwechiitiko, nzira, dzinoisa vanhu pakati. Kusangana pakati pavo netsika dzavanomiririra vachiunza simba rakakosha uye rakasimba kumatunhu avanopfuura ndiwo akakosha. Mufaro kune wakakodzera kukosheswa kwerwendo rwakanaka uye unononoka kushanya pakanaka kwazvo.